Kulan looga hadlayey dar-dar gelinta Howlaha Dekedde Muqdisho oo lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Kulankan oo ay isugu yimaadeen Taliyaha Hoggaanka Canshuuraha ee Ciidanka Booliska Soomaliyeed Gen: Cabdullaahi Xasan Bariise , Saraakiil ka trisan ciidanka Booliska iyo Guddiga Ganacsatada iyo Gaadiidleyda Dekedda magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay sidii loo dar dar gelin lahaa shaqada Dekedda magaalada Muqdisho oo hada wixii ka dambeeya shaqeyn doonta 24 saac.
Kulanka ayaa la isku afgartay in hada wixii ka dambeeya la joojiyo gaadiidka sida xad dhaafka ah loo raro ee ka baxa Dekedda magaalada Muqdisho.
Maxamed Xirsi Xaashi oo ku hadlay magaca Guddiga Ganacsatada iyo Gaadiidleyda ayaa Dowladda kaga mahad naqay suurto gelinta ay suuro gelisay in ka badan 28 sano kadib ay xilli habeena shaqeyso Dekedda magaalada Muqdisho.
Taliyaha Hoggaanka Canshuuraha ee Ciidanka Booliska Soomaliyeed Gen: Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa sheegay in u jeedada ay kulankan isugu yimaadeyn ay tahay sidii loo laba jibaari lahaa shaqooyinka Dekedda magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa xalay ku guuleysatay in Dekedda Muqdisho ay shaqeyso xilli habeen ah kadib markii dhawaan uu Madaxweyne dalka Maxamed C/lahi Farmaajo amray in si deg deg ah Dekedda habeenkii loo howl geliyo si kor loogu qaado daqliga dalka.